Waxaad ka heli xagga samada haddii aad ay naftooda dilaan? | Apg29
Norwegian Princess Martha-Louise ee ex-ninkeeda Ari Behn ayaa is-dilay at da'da 47.
Waxaad ka heli xagga samada by ismiidaamin ah? Waxaan doonayaa in aan marka hore la dhiso ee runta ah aad u muhiim ah: Ma ahan sida aad dhiman go'aamisa haddii tagno oo samada. sababta keeno waa haddii aad ka tirsan Ciise, haddii aad heshay isaga sidii Rabbigu.
Habeenimadii Christmas yimid warka ah in Norwegian Princess Martha-Louise ee ex-ninkeeda Ari Behn ayaa is-dilay . Waxa uu ahaa 47 sano jir.
actor The Swedish Mikael Persbrandt qoray on Instagram :
Yahan. Karekare Ari, saaxiibkay, waxaan wada xusan in Trondheim ee October. Waxaad soo xirtay iftiin aad gudahood, ruuxii hore, kulaylka dhif ah, de haddaba ma waxaan fahamsanahay in aad qaaday gudcurka, waxaa i dhaawaceysaa. Waan idin baryayaaye, waayo, waan ku baryayaaye, carruurta iyo qoyskaaga aad. Nabadi ha idinla jirto walaalkiis. ♥ ️
dhacdo aad u murugo iyo mar kale waxaan xusuusin doonaa in ay jiraan dad kuwaas oo ay dareemaan si xun xun in ay jid uma arko baxay. Sidaa darteed, waa in aan loo hubiyo in dadka fursad u leeyihiin inay maqlaan wax Ciise ku saabsan si ay u heli kartaa isaga oo aanay u badbaadin.
Anigu garan maayo saabsan Ari Behn ahaa badbaadiyey, laakiin waan ogahay in Ciise yahay oo keliya dadka rajo. Haddii aad leedahay Ciise, marka dhuftay by jiritaanka dhacdooyin kala duwan oo aad leedahay Ciise si ay u tagaan. Waxa uu doonayaa inuu caawiyo, la bogsiiyo, iyo raaxo.
Mikael Persbrandt qoray: "Haddaba, waxaan fahamsanahay in aad qaaday gudcurka, waxaa i dhaawaceysaa." Waa gudcur in Ciise ka badbaadin doonaa. Aan ku siin nin la shaqayn jiray, Ciise Masiix.
Waxaad ka heli xagga samada haddii aad ay naftooda dilaan? Waxaa jira dadka qaar qaba dhibaatooyinka this. kuwa jecel yahay ayaa laga yaabaa in is-, oo waxaad la Yaabteen haddii ay tageen xagga samada.
Waxaan doonayaa in aan marka hore la dhiso ee runta ah aad u muhiim ah: Ma ahan sida aad dhiman go'aamisa haddii tagno oo samada. sababta keeno waa haddii aad ka tirsan Ciise, haddii aad heshay isaga sidii Rabbigu.
Balanqaad meel yaal Firdooska?
Waxaa jira qaar ka mid ah kuwaas oo u malaynayaa in haddii mid ka mid qudhiisu foori up ee hawada iyo suunka qaraxa oo aad leedahay meel la hubo in Jannada. No, ma ahan. Haddii waa inaad haysataa meel damaanad qaaday samada, markaas waa in aad heshay Ciise sida Eebahaa. Haddii kale, waxaad samada ma tegi doonaa.
Ma ahan in haddii aad dhimato si gaar ah in ay cirka u tegi. Nor waa in haddii aad dhimato si kale oo gaar ah si cadaabta tegi. No, waxa go'aaminaya haddii aad tagto samada ama cadaabta waa haddii aad leedahay Ciise ama ma.
waxba kuma yeeli doonaan
Laakiin taasi macnaheedu ma aha in ay tahay oo kaliya in ay naftooda dilaan si aad u hesho samada. Absolutely ma. Ilaah ma doonayo in aad naftaada waxyeelo. Ilaah wuu idin jecel yahay iyo waxa uu leeyahay qorshe kuu.
Waxaa jira meel caanka ah ee Falimaha Rasuullada. Bawlos iyo Silas ayaa xabsiga loogu riday. In fiidkii way ka gabyi heeso halka maxaabiistuna way dhegaysanayeen. Markaas waxaa jiri doona dhulgariir, Biro Naar dhaco, iyo albaabbadii xabsiga ka furtay.
Markaasaa xabsihayihii cabsato iyo fikirka uu noolaa seeftiisa qaadashada. Markaasaa Bawlos u ooyaa: Do ma naftaada wax yeelo, waayo, kulligayo halkaannu wada joognaa. Markaasaa xabsihayihii yiri: Maxaan sameeyaa inaan ku badbaado? Paul jawaabahaaga: Rumayso Rabbi Ciise iyo aad noqon doonaa gurigaaga badbaadiyey.
Ilaah waxa uu rabaa in aad si ay u badbaadaan
Ilaah Sidaa darteed in aadan samayn doonaa ismiidaamin ah. Waxa uu doonayaa in aad si ay u badbaadaan. Oo waa keliya lagu helo rumaysadka xagga Ciise Masiix. Haddii aad weli u kici maayo, waayo, Ciise soo jeestay oo aqbalay isaga, waa in aad samayn.
Hel Ciise oo ka qiratid afkaaga, oo cod weyn oo kala cadeeyo in uu yahay Rabbiga iyo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay ka soo. Kadibna waxaa laguu badbaadi doontaa oo badbaadiyey. oo dembiyadiinna oo dhanna waa cafiyan yihiin. Waxaad noqon ilmo Ilaah.